Ososayensi baseBelarusian ukucwaninga ngezinto zokwakha ezitholakala kalula, ukufakwa | IHaishu
I-MinSK, 25 Meyi (BelTA) - I-National Academy of Science of Belarus ihlose ukwenza eminye imisebenzi ye-R&D ukunquma ubuchwepheshe obuthembisa kakhulu, obuthinta imvelo nangokwezomnotho bokwenza izinto zokwakha izinto eziphilayo kanye nokupakishwa okwenziwe ngabo, iBelTA ifundile kuNgqongqoshe Wezemvelo waseBelarus Nezokuvikelwa Kwemvelo u-Aleksandr Korbut ngesikhathi sesayensi yamazwe omhlaba ingqungquthela Sakharov Readings 2020: Izinkinga Zezemvelo Zekhulu lama-21.
Ngokusho kukangqongqoshe, ukungcoliswa kwepulasitiki kungenye yezinkinga ezicindezela imvelo. Isabelo semfucuza epulasitiki sikhula minyaka yonke ngenxa yokunyuka kwezinga lokuphila kanye nokukhiqizwa okukhulayo nokusetshenziswa kwemikhiqizo yepulasitiki. Abantu baseBelarusi bakhiqiza amathani angaba ngu-280,000 kadoti weplastiki ngonyaka noma i-29.4kg nge-capita ngayinye. Ukufakwa imfucumfucu kwakha amathani angaba ngu-140,000 equkethe (i-14.7kg ngephepha ngalinye).
UMkhandlu Wongqongqoshe waphasisa isinqumo ngomhlaka 13 kuJanawari 2020 sokugunyaza uhlelo lokuthatha isinyathelo sokukhipha amapulasitiki kancane kancane bese libuyisela endaweni enobungani bemvelo. UMnyango Wezemvelo Nezokuvikelwa Kwezemvelo uphethe ukuxhumanisa umsebenzi.
Ukusetshenziswa kwezinhlobo ezithile zetafula lepulasitiki elahlekile kuzokwenqatshelwa embonini yokudla yomphakathi waseBelarusian kusukela ngomhlaka 1 Januwari 2021. Kuthathwe izinyathelo zokuhlinzeka ngezinsizakalo zezomnotho zabakhiqizi nabasabalalisi bezimpahla ekufakweni kwemvelo okuhlelekile. Inani lamazinga kahulumeni okuphoqelela izidingo zokufakwa kwemvelo ezinobungani bemvelo, kufaka phakathi izinto ezifakwayo ezinokuhleleka, zizosetshenziswa. I-Belarus isungule izichibiyelo kumthethonqubo wezobuchwepheshe weCustoms Union ekufakweni okuphephile. Kufunwa ezinye izixazululo zokubuyisa izimpahla zepulasitiki kanye nokwethula ubuchwepheshe obusha obuthembisayo.
Ngaphezu kwalokho, kuthathwe izinyathelo ezahlukahlukene ezinjengezinkuthazo zezomnotho ukukhuthaza labo abakhiqizi nabasabalalisi abathola ukupakisha okunemvelo kwemikhiqizo yabo.
NgoMashi kulo nyaka, amazwe nezinkampani eziningana ze-European Union (i-EU) nezinkampani ezimele izingxenye ezihlukene zomkhakha wamapulasitiki wase-Europe azibophezele ukunciphisa imfucuza yamapulasitiki, zisebenzisa amapulasitiki amancane ngemikhiqizo, ziphinde zisebenze futhi ziphinde zisebenzise okunye.